Exchange udu, e kwuru
Historical mgbanwe ọnụego maka niile ego na ụwa kemgbe 1992 ruo taa. Mgbanwe ego chaatị dị iche iche n'ihi na onye ọ bụla afọ, ọnwa na afọ 20 gara aga.
Mba ọzọ mgbanwe udu
-agbaso n'ife ofufe pound Afghan afghani
Albanian agha Algerie dinar
Angolan ọhụrụ kwanza Antilliaanse Gulden
Aruban florin Aussie dollar
Austrian shilling Azerbaijani Manat
Belarusian ruble Belize dollar
Bolivian boliviano Bosnia na Herzegovina kọnvatịbụl akara
Botswana pula Brazil n'ezie
CFC franc Canadian dollar
Chile Unidad de Fomento Chile peso
Congo na franc Costa Rica colon
Danish okpueze Deutsche akara
Estonian Kroon Etiopia birr
Fiji dollar France eziokwu
Gibraltar pound Greek mkpụrụ ego drakma
Iceland krone Ijipt pound
Irish pound Israel ọhụrụ shekel
Kambodia riel Kazakhstani tenge
Latvian lat Leone
Mauritius rupee Mexico peso
Morocco dirham Mozambique metical
Nicaragua Cordoba Nigerian naira
Nku azu akara North Korean merie
Onye Belgium franc Pa`anga
Pound magburu onwe Qatari riyal
SDR (Special na-eru ikike) Saint Helena pound
Salvadoran colon Saudi riyal
Singapore dollar Siria pound
South Korean merie South Sudanese pound
Swiss franc São Tomé na Príncipe dobra
Taiwan ọhụrụ dollar Tajikistani somoni
Tala Tanzania shilling
Thai baht Trinidad na Tobago dollar
Troy ounce nke ọla edo / electronic gold) Troy ounce nke ọla ọcha
Turkmenistan ọhụrụ Manat UAE Dirham
Uruguayan peso Uzbekistan nchikota
Yugoslavian ọhụrụ dinar Zambia kwacha
N'elu maka ndepụta nke mgbanwe udu
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 2021.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2021 maka ụbọchị ọ bụla.
Ntinye ego na ntughari ego nke ego mba uwa maka 2020.
Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2020 maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 2020 maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 2019.
Ọnụego mgbanwe maka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka ụbọchị ụbọchị maka 2019. Ọnụego mgbanwe maka Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka ụbọchị ụbọchị maka 2019. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2019 maka ụbọchị niile.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2018.
Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2018 kwa ụbọchị. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2018 kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2018.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2017.
Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2017. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2017. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2017 kwa ụbọchị.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2016.
Akụkọ banyere ọnụego ego ụwa kwa ụbọchị. Akụkọ banyere ọnụego ego ụwa kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2016.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2015.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2015. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2015. Akụkọ banyere mgbanwe ọnụego ego niile ka enyere mmadụ niile aka.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2014.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2014 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2014 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2014.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2013.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2013.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2012.
Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula. Nigerian naira ọnụego mgbanwe na ruturu maka 2012 maka ụbọchị ọ bụla.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 2011.
Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 2011. Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 2011. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2010.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2010.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2009.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe kwa ụbọchị (see okwu) nke ego ụwa maka 2009.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2008.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2008. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2008. Ebe nchekwa data nke akụkọ ihe mere eme ọnụego mgbanwe.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2007.
Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2007. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2007. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2006.
Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2006 kwa ụbọchị. Akụkọ ihe mere eme nke ụwa Nigerian naira ọnụego mgbanwe maka 2006 kwa ụbọchị. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2005.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2005.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 2004.
Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 2004 maka ọnwa na maka ụbọchị niile. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 2004 maka ọnwa na maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 2004 maka ụbọchị niile.
Ntinye ego na ntughari ego nke ego mba uwa maka 2003.
Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 2003 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 2003 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị. Akuko zuru oke nke onu ahia ego nke ubochi n’onwa obula.
Akụkọ banyere ọnụego mgbanwe na ihe ndị e kwuru maka 2002.
Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2002. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 2002. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 2002.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 2001.
Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2001. Kwa ụbọchị Nigerian naira ọnụego mgbanwe (see okwu) maka 2001. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 2000.
N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. N'ebe a, ị nwere ike ịchọpụta ọnụego ego ọ bụla maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ kwuo banyere ihe ndị na-akwụ ụgwọ ụwa maka 2000 maka ọnwa ọ bụla na kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe na ọnụ ahịa ego nke ụwa maka 1999.
Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 1999.
Akụkọ banyere ruturu na ọnụego mgbanwe na 1998.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1998 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1998 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere Nigerian naira ruturu maka ụbọchị ọ bụla nke 1998.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 1997.
Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1997 maka ụbọchị niile. Akụkọ banyere mgbanwe nke mkpụrụ ego ụwa ọ bụla maka 1997 maka ụbọchị niile. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 1996.
Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 1996. Ọnụego mgbanwe maka ụbọchị kwesịrị ekwesị maka 1996. Nigerian naira ọnụego mgbanwe na ruturu maka 1996 maka ụbọchị ọ bụla.
Ọnụego mgbanwe na rịrị okwu maka 1995.
Ọnụego mgbanwe na nhota maka 1995 maka ụbọchị ọ bụla. Ọnụego mgbanwe na nhota maka 1995 maka ụbọchị ọ bụla. Anyị na-edekọ akụkọ gbasara ebe niile ihe ndị dị ka maịlị kwa ụbọchị.
Ọnụego mgbanwe ego, ọnụahịa ego ụwa maka 1994.
Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 1994. Akụkọ ihe mgbe ochie na-ekwu maka ụbọchị ọ bụla nke 1994. Ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ruturu nke Nigerian naira maka 1994 maka ọnwa na maka ụbọchị niile.